Sheekh Dirir Oo Xukuumadda Ku Dhaliilay In Kitaabkii Ay Ku Dhaaratay Baal Martay Isagoo Xukuumadda Ugu Baaqay Inay Tahriibta Wax Ka Qabato | Salaan Media
Sheekh Dirir Oo Xukuumadda Ku Dhaliilay In Kitaabkii Ay Ku Dhaaratay Baal Martay Isagoo Xukuumadda Ugu Baaqay Inay Tahriibta Wax Ka Qabato
Hargeysa (SM) – Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ka mid ah culimada waaweyn ee Somaliland ayaa ka hadlay dhibaatada Tahriibka iyo khatarta dhalinyarada dalka ka baxaysa.
Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir, ayaa khudbadiisii Jimcaha ee doraad ku soo qaatay dhibaatada aafada tahriibtu ku leedahay bulshada, saamaynta dhaqan-dhaqaale ee mustaqbalka ay ku keeni karaan dalka, waxaanu dhaliilay hay’addaha amaanka ee Somaliland, waxaanu sheegay inay ka gaabiyeen la dagaalanka aafada Qaran ee Tahriibta iyo silsiladaha dhalinyarada u fududeeya inay dalka ka baxaan, waxaanu xukuumaddu u soo jeediyay in hawl-gallada Ciidamada RRU-da lagu jiheeyo wax-qabashada sil-siladaha wax tahriibiya ee dalka ka hawl-gala.
Sheekh Dirir oo arimahaa ka hadlayaana waxa uu yidhi “Wallaalo-yaal waxaynu ogsoonahay in dalkeenii uu taggan tahay Ummaddana cagaha laga gujiyey, dhalinyaradeenii ku haysata saxaraha iyo Badaha, wiilasheena iyo gabdhaheenu waxay noqdeen wax la kala iibsado oo waa alaabo qaaliya. Haddii Soomaali lagu arko Liibiya, Sudan iyo Itoobiya waa alaab qaaliya oo kuu soo gashay sida macdanta bannaanada laga helo ee aadka loo raadiyo oo ku soo gashay oo kale weeye”
Sheekh Dirir, waxa kale oo uu sheegay “Waxa la yidhi waxa halkaas jooga mid la yidhaahdo Magafe iyo Maqade. Ka Dadka qabsanaya oo ka la yidhaahdo magaciisa Magafe isagu wuu ku dhagayaa ka kalena waa mid deegaan ah oo xarooyinka ay ku xareysan yihiin leh, isagana waxa la yidhaahdaa Maqade. Marka Xoolaha sayladda lagu Iibinayo mid waxa la yidhaahdaa dilaal midna Macal-qabad midna waxaa la yidhaahda ha joogin. Markaa Dadka magacyadaas leh midi waxa uu qaadanayaa 2000, 2500 oo Dollar oo mid walba wax buu helayaa, markaa afarta kun ama shanta kun ee Xawaaladaha laga dirayo waxa qaata Dadka magacyadaas leh. Waxa la yaab leh oo ka sii daran Hooyadii halkan joogtay Ilmihii way la hadlaysaa oo waxay leedahay ama Hooyo Paris igala soo hadal ama Saxaraha iyo Badda ku dhimo oo meeshaas laga soo dhergayo ka soo Dharag, iyaduna sidaas ayay ku sagootiday. Waxyaabaha aadka u cajaa’ibka waxa ka mid ah inay qoysas badani ay raaceen Hooyadii, Aabihii iyo Carruurtii yar-yarayd. Waxa kale oo dhacday in Xaasas badan oo siddeed Ciyaala leh intay gabadh tidhaahdo Dahabka I amaanaysii Aroos ayaan tagayaayee intay dahabkii xaraashto iyo qofkii ay wax ka amaahatay iyo Ninkeedii iyo Carruurtiiba cidla kaga dhaqaajiso. Waxa kale oo mararka qaar la sheegayaa in qaar aan Afartan-bixin tagaan xilli kuwii ay raacaysay soo deg-degaan, waxaana dhaca wax la layaabo” ayuu yidhi waxaanu intaa ku daray “Waxa dhacda oo kale inay qayb wayn ka yihiin inay Dadku caydhoobaan. Waayo barigii hore qofka marka uu halkan joogo waxa la waydiin jiray nooliga, laakiin immika waxa la sameeyay silsilad isku xidhan oo muxawil ku qaadaysa Dadkii oo inta la sii marayo waddamadan soke waxba lagu waydiin mayo. Su’aalo badan ayaa waxa nalagu waydiinayaa, Sheekhow Hooyo ayaa Dahabkeedii Iibinaysa Ilmaheedii oo halkaas ka soo qaylinaaya daradeed oo Magafe iyo Maqade haystaan, waana ogahay oo Dadkii Tahriibay ayaa loo Iibinayaa maahana si loo soo celiyo ee waa si loo sii dhaafiyo, markaa lacagta halkaas lagu bixinaayo Xalaal matahay? Farsamada kale ee la keenay waxa la odhanayaa haddii aad soo dhiibi waydo Isbeedh baadh ayaa Ilmaha laga samaynayaa oo waa la gawracayaa, dabadeed Kalyaha iyo Beerka ayaa lagala baxayaa, markaa waalidkii waxay ku kalifaysaa inuu debadda la hadlo kii wax haystayna wixisii ayuu Iibinayaa, markaa bulshada dhibaatadaas ayaa haysata.”
Sh. Maxamed Sh. Cumar waxa ka dayriyey saamaynta arrinta tahriibku mustaqbalka ku yeelanayso dalka, isaga oo xusay in Qorshaha tahriibta ee wakhtigan ka socdaa ay sababi karto in dadkeenna la baro-bixiyo, dadka kalena ay la wareegaan ku-noolaanshaha dhulkan, isaga oo tusaale u soo qaatay dhacdooyin ku suntan taariikhda Islaamka “Marka Dadkii waa-waynaana ay dhimanayaan Dadkii yar-yaraana ay halkaas u carraraan waxa iska macaruufa inaanay bannaananayn ee la is-baddeli doono uun. Ummad kale ayuu Illahay u dirayaa Gaalo iyo Islaamba waxay noqdan. Waxaynu og-soonay in dad meel laga kiciyo oo Dad kale la dejiyo. Waxaana ka mid ahaa waddankii la odhan jiray Andulus oo culimada badan ee Islaamku ka soo baxeen oo immika la yidaahdaa Spain.”ayuu yidhi Sheekh Dirir, sida lagu baahiyey Wargeyska Madaxa-banaan ee Ogaal, waxaanu intaa ku daray “Markaa maaha inaynu is jiidano oo kaliya ee waa in xal la keenaa. Anigu waxaan odhanayaa waxay Kitaabka ay gacanta u sareen inuu daacad u yahay Dalka iyo Dadka. Illahay waxa uu idin farayaa inaad amaanada halkeeda gaadhsiisaan oo dadkaasi ay qaataan doorkii masuuliyada. Dadkan marka hore waxa joojin kara Iimaankiisa, lakiin waa inaynu la nimaadno asbaabtii oo dadkan dadka xukuma waa in la yidhaahdaa sideebaa dadkan Iimaankooda loo kicin-karaa.”
Ugu dambayntii, waxa uu Sheekh Dirir u soo jeediyey hay’adaha Dawladda in gacan bir ah lagaga hortago Aafada Tahriibta oo uu ku mesaalay Dhacdadii JIIF-OO-JAQ, isaga oo dhan kale ku taliyey in la-dagaalanka Silsiladaha Isku Xidhan ee Wax tahriibaya “Waxa masuuliyiinta la gudboon; kuwa intaas Xeerar soo saraaya oo is daba jooga maalin walbana aynu maqalno Xeer ayaa la baas gareeyay ee Xeerkii Tahriibku mee. Waa in Silsiladan wax laga qabtaa, waa Jiif oo jaqdii oo kale, markaa waxa jirta meelaan hadal wax ka tarayn oo u baahan in gacan wax lagaga qabto. Waxaan ku talin lahaa in Silsiladaas Tahriibka qolada la yidhaahdo RRU-da ee madaxa duubta ee habeenkii u soo daata dadka, in halkan in yar lagu soo jeediyo. Waxaana waalidka la gudboon inuu ogaado cidda uu raaco iyo halka uu maro.”